E nwere ọtụtụ akpata na-ebufe ọdịnaya ka mpụga ike mbanye na si n'ebe iTunes dị ka ma nchekwa media-atụle ga-ala nke nkà. Mgbe ọ na-abịa mpụga ike mbanye a onye nwere zuru na iwu ma na-achịkwa dị iche iche songs na media nke e ịchekwa n'elu ya. Ụfọdụ ọrụ tụlee mpụga ike mbanye nwere ize ndụ na maka otu ihe ahụ ha na-nke na-ele na igwe-ojii technology ma ọ bụ online ọrụ dị ka nke iTunes bụ ndị kasị dịrị nchebe ebe iji jide n'aka na mgbasa ozi na-anọgide enem. N'aka nke ọzọ na iTunes nwere ihe mgbochi ụfọdụ n'ihi t nke ọrụ ịhụ ka ọ dị mfe nyefee music faịlụ ka mpụga HD. Na a na nkuzi ụzọ importing music si mpụga ike mbanye ka iTunes ga-atụle ma ọ ga-emekwa ka n'aka na ọrụ na-maara nke ọma ihe usoro dị ka mkpa foto ga-kwukwara na nke a.
Part1: Free ụzọ ebufe music si mpụga ike mbanye
Onye ọ bụla hụrụ free na ya mere ihe nke mbụ nke isiokwu a bụ iji jide n'aka na iTunes na-dị na kọmputa a n'ụzọ na-bụ ngwa ngwa, oru oma, irè na n'elu ihe nile free. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ga-ahụ nke a isiokwu a nnọọ inyere ha aka dị mgbagwoju Filiks na-mgbe chọrọ na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na na enyemaka nke ole na ole clicks na iTunes media nchekwa na-agafere si mpụga ike mbanye na kọmputa. Na nke kacha mma na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na nzọụkwụ na-kpọrọ aha n'okpuru na-soro na otu iji na-enweghị ihe ọ bụla awụgharị:
m. The mpụga ike mbanye nke nwere iTunes media nchekwa bụ na-mmasị ka kọmputa:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ẹkedori iTunes software omume nke na-egosi ndị na-esonụ interface:
III. On PC na draịvụ ike na emi odude ke desktọọpụ> kọmputa m na Mac mpụga ike mbanye nwere ike hụrụ na desktọọpụ. Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mbanye na meghere na-ele iTunes media na nchekwa ma mgbe ahụ na nchekwa na-na dọkpụụrụ ka music nchekwa nke iTunes mezue usoro na zuru:
too ogologo. Site na iji nke a dị mfe usoro onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ọdịnaya na-depụtaghachiri ka iTunes software n'efu. Ọ na-atụ aro iji jide n'aka na iTunes na-emechi na re-ulo oru iji jide n'aka na ndị ọhụrụ iTunes media nchekwa sinks na software omume na-na-niile ọdịnaya n'ime ya nke nwere ike mgbe ike anya na otu ebi ndụ nke na-media ọdịnaya nchekwa dọkpụrụ. Site na iji usoro a ọ bụghị nanị na music ma ihe niile Genres na-akwado site na iTunes nwere ike dọkpụụrụ gaa n'ime usoro ihe omume enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Part 2.How nyefee Music si mpụga ike mbanye ka iTunes na TunesGo mfe
TunesGo bụ ọzọ a magburu onwe mgbakwunye site Wondershare ha egwu collection nke software omume. Ọ bụghị nanị na ejisie faịlụ na nchekwa n'ihi na onye ọrụ mgbe ọ na-abịa iTunes ma ọ na-eme ka n'aka na ihe kasị mma na-eme ka banyere niile mbipụta na-metụtara iTunes. Site efu songs na mpụga media mgbakwunye na TunesGo eme ka o kwe onye ọrụ iji nweta ihe kasị mma nke ihe niile nke na nke a na mgbe doo onye ọrụ naanị ya. E nwere ọtụtụ iri puku atụmatụ nke software omume na ike ga-atụle n'ebe a ma banyere nanị ole na ole na-esonụ bụ a nkenke nkọwa nke ha nile:
Ọ na-eme na data nke onye ọrụ nnọọ nke onwe dị ka ọ na internet ohere a chọrọ na-agba ọsọ software omume na offline transfer bụ ya mere na o kwere omume.
The software na-nyere maka a ikpe oge na ọ bụ onye na uru nke ọtụtụ ndị asọmpi na-anaghị enye ka ọrụ.
TunesGo nwere ihe dị egwu interface na ya mere ọ ga-eji ihe dị iche iche ndị ọzọ nzube dị ka mma.
Mmepe na Wondershare na-arụ ọrụ nnọọ ike ijide n'aka na ọhụrụ nsụgharị nke usoro ihe omume na-ulo oru na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ oge.
Dị ka usoro ihe omume dị multipurpose ọ ga-eji ruo ọtụtụ ndị ọzọ nzube dị ka ebufe data ka iPad, iPod na iPhone nke ọ bụla nlereanya dị ka ọ na-akwado ndị niile iDevices.
Iji jide n'aka na needful a mere na-esonụ bụ usoro na onye ọrụ kwesịrị ka na-eso nke a ga-esi na ya pụta dị ka kwa mkpa, chọrọ na chọrọ:
m. Ihe omume ahụ bụ na-ibudatara http://www.wondershare.com/tunesgo/ ka kacha ọhụrụ version bụ mgbe dị na ukara Wondershare website. Ozugbo exe faịlụ e ebudatara onye ọrụ kwesịrị ka na-agba ọsọ ya na isi interface-egosi:
ii. Ozugbo ọ e mere onye ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ mpụga ike mbanye na kọmputa:
III. Nke a nwere ọgụgụ isi na ịmụrụ anya omume nwere ihe tinye button n'elu site na ịpị nke onye ọrụ ga-enwe ike mbubata niile media na mpụga mbanye na kọmputa:
too ogologo. Site na ịpị nhọrọ nke "Smart Bubata iji iTunes usoro ihe omume ga-ahụ na niile songs na ndidi ke software omume ie iTunes tupu na-agafere ka iTunes otu ugboro ọzọ na ndị fọdụrụ niile na-ekpe ka ha bụ ndị na ọ ga-rụchaa usoro kpamkpam dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru:
Part 3.Pros na ọghọm & Mmechi
Nyefe site na nke a software omume bụ nnọọ pụtara na mfe karịa mgbe
A ọhụrụ ọrụ nwere ike na-esiri ike dị ka elu ọnụ ọgụgụ nke clicks bụ aka na nke a.
The software bụ 100% ize ndụ na njehie free; N'ezie ọ corrects njehie nke onye ọrụ chere ihu mgbe na-ebufe ọdịnaya ka / si iTunes.
Ịnyefe ọdịnaya gaa iTunes nwere ike ịbụ ọtụtụ karịsịa ma ọ bụrụ na mmadụ na-eji usoro ihe omume nke oge mbụ ma na ojiji nke TunesGo ọ bụghị nanị mfe ma onye ọrụ na-emekwa ka n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na nke a. Inweta ihe kasị mma nke usoro bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na nri ngwá ọrụ e na-akwado ya na TunesGo bụ otu n'ime ha. Ọ na-dụrụ niile ọrụ mbụ na-agbalị obere oge inye bụ nke n'efu maka onye ọ bụla na mgbe ahụ gaa n'ihu ịzụta ihe omume nke m n'aka na ị ga-eme.
Olee otú iji weghachi iPhone Bookmark si iTunes
> Resource> iTunes> Nyefee Music si mpụga ike mbanye ka iTunes